Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.4.3 Gunaanad
Ururinta xog ururinta waa mid suurtagal ah, mustaqbalkana waxa ay u badan tahay in ay ku lug leedahay tiknoolajiyada iyo ka qaybqaadashada ka-qaybgalka.
Sida eBird muujiso, qaybinta xog ururinta waxaa loo isticmaali karaa cilmi baaris. Dheeraad ah, PhotoCity waxay muujineysaa in dhibaatooyinka la xidhiidha tijaabinta iyo tayada xogta ay yihiin kuwo la xalin karo. Sidee loo qaybin karaa xog ururinta xogta cilmi baarista bulshada? Hal tusaale waxaa ka mid ah shaqada Susan Watkins iyo asxaabteeda mashruuca Malawi Journals Journey (Watkins and Swidler 2009; Kaler, Watkins, and Angotti 2015) . Mashruucaan, 22 qof oo maxali ah oo loogu yeero "saxafiyiin" ayaa lagu qoray "joornaalada wada sheekaysiga" kuwaas oo si faahfaahsan uga hadlay, wada sheekeysiga ay ka baqayaan AIDS-ka nolol maalmeedka dadka caadiga ah (waqtiga mashruuca bilawday, qiyaastii 15% dadka waaweyn Malawi waxaa ku dhacay HIV (Bello, Chipeta, and Aberle-Grasse 2006) ). Sababtoo ah xayndaabkooda, wariyeyaashu waxay awoodeen in ay ka xumaadaan wada sheekaysiga laga yaabo in ayan ku guuldareysan Watkins iyo wada-shaqeenteeda cilmi baarista reer Galbeed (Waxaan ka hadli doonaa anshaxa tan dambe ee cutubka markaan ku deeqo talo ku saabsan dejinta mashruuca iskaashigaaga gaarka ah) . Xogta ka timid Mashruuca Journals Malawi waxay keentay tiro badan oo ah natiijooyin muhiim ah. Tusaale ahaan, ka hor inta aan mashruuca la bilaabin, dad badan oo dibadda ka yimid waxay aaminsan yihiin in ay jirto aamusnaan ku saabsan AIDS-ka Afrika ka hooseeya Saharaha, laakiin joornaalada wada sheekeysiga ayaa muujiyay in tani ayan si cad u ahayn kiiska: saxafiyiinta waxay ka baqayaan boqolaal munaaqood mawduuc, meelo kala duwan aaska, baararka, iyo kaniisadaha. Dheeraad ah, nooca wadahadaladaan waxay gacan ka geysteen in cilmi-baadhayaashu si fiican u fahmaan qaar ka mid ah iska-caabinta isticmaalka kondhomka; habka isticmaalka kondhomka loo adeegsaday farriimaha caafimaadka dadwaynaha ayaa ah mid aan ku habooneyn habka looga hadlo nolol maalmeedka (Tavory and Swidler 2009) .
Dabcan, sida xogta laga helo eBird, xogta ka socota Mashruuca Journals Malawi ma ahan mid kufiican, arin laga doodo Watkins iyo asxaabtiisa. Tusaale ahaan, wada sheekeysiga diiwaangashan ma aha shay aan rasmi ahayn dhamaan wadahadalada suurtogalka ah. Halkii, waxay yihiin tirakoob aan dhamaystirnayn oo wadahadal ku saabsan AIDS-ka. Marka laga eego tayada xogta, cilmi-baarayaashu waxay rumaysnayeen in suxufiyeyaashu ay yihiin wariyeyaasha tayada sare leh, sida lagu caddeeyey in si joogta ah loogu qoro joornaalada iyo joornaalada. Taasi waa, sababtoo ah suxufiyiinta ku filan ayaa la geeyay meel yar oo kufilan mowduuc gaar ah, waxay ahayd suurtogal in la adeegsado shaqaale banaan si loo qiimeeyo loona xaqiijiyo tayada xogta. Tusaale ahaan, shaqaale galmo magaciisa lagu magacaabo "Stella" ayaa dhowr jeer ku soo bandhigay joornaalada afar saxafiyiin kala duwan (Watkins and Swidler 2009) . Si aad u sii dhisto dareenkaaga, miiska 5.3 ayaa muujinaya tusaalooyin kale oo ah ururinta xog ururinta cilmi-baarista bulshada.
Jadwalka 5.3: Tusaalooyinka Mashruuca Ururinta Xog-ururinta Macluumaadka ee Cilmi-baarista Bulshada
Wadahadal ku saabsan HIV / AIDS ee Malawi Watkins and Swidler (2009) ; Kaler, Watkins, and Angotti (2015)
Waddada oo ku taalla London Purdam (2014)
Munaasabadaha isku dhacyada ee bariga Congo Windt and Humphreys (2016)
Waxqabadka dhaqaale ee Nigeria iyo Liberia Blumenstock, Keleher, and Reisinger (2016)
Ilaalinta hargabka Noort et al. (2015)
Dhamaan tusaalooyinka lagu qeexay cutubkan ayaa ku lug lahaa kaqaybqaadashada firfircoon: saxafiyiinta waxay ku turjumayaan sheekooyinka ay maqleen; birders waxay ku dhajiyeen liistadooda hubka; ama ciyaartoyda ay sawiradooda ku dhajiyeen. Laakiin maxaa dhacaya haddii ka qaybqaadashadu ay ahayd mid toos ah mana u baahnayn wax xirfad ah ama waqti go'an oo la soo gudbiyo? Tani waa ballan bixinta "dareenka ka qaybqaadashada" ama "dadka xasaasiga ah." Tusaale ahaan, Pothole Patrol, mashruuc ay soo saareen saynisyahannada MIT, ayaa kor u qaadaya koromoomiyeyaasha gaaban ee GPS-ga gudaha todoba taksi taxi ah oo ku yaala Boston (Eriksson et al. 2008) . Sababtoo ah wadista baabuurka boodhka ayaa ka baxaya calaamad isdabajoog ah, qalabkan, marka la geliyo gudaha taksiga, wuxuu abuuri karaa khariidadaha boodhka Boston. Dabcan, taksiyadu ma kala soocaan jidadka, laakiin, bixinta cashuur ku filan, waxaa jiri kara caymis ku filan oo bixiya macluumaad ku saabsan qaybo badan oo magaalada ah. Faa'iido kale oo ka mid ah nidaamyada dejinta ee ku tiirsan tiknoolajiyadda ayaa ah inay xirfad u leeyihiin geedi socodka xogta: Inkastoo ay u baahan tahay xirfad wax ku ool ah eBird (sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad si karti leh u aqoonsato noocyada shimbiraha), uma baahna xirfad gaar ah ku biiraan Pothole Patrol.
Waxaan sii wadi doonaa, waxaan ka shakisanahay in mashaariic badan oo loo qaybiyey xog ururinta ay bilaabi doonaan inay isticmaalaan awoodaha taleefannada gacanta ee horayba u qaadeen balaayiin qof oo adduunka ah. Telefoonadani waxay hore u leeyihiin tiro badan oo dareemayaal ah oo muhiim u ah cabbiraadda, sida mikrofones, kamaradaha, qalabka GPS, iyo saacadaha. Dheeraad ah, waxay ku taageeraan barnaamijyada saddexaad ee kobcinta awoodaha cilmi-baarayaasha qaarkood inay xakameeyaan qawaaniinta xogta ee hoose. Ugu dambeyntii, waxay leeyihiin internet-ku-xirnaan, taasoo ka dhigaysa inay suurtogal tahay in ay iska-saaraan xogta ay ururiyaan. Waxaa jira caqabado farsamo oo fara badan, oo ka mid ah dareemayaasha aan fiicnayn illaa nolosha nolosha, laakiin dhibaatooyinkaasi waxay yareyn doonaan waqti ka dib markii ay horumarinayaan tiknoolijiyada. Arrimaha la xidhiidha asturnaanta iyo anshaxa, dhanka kale, waxaa dhici karta in uu sii xumaado; Waxaan ku soo laaban doonaa su'aalaha anshaxa marka aan ku deeqo talo ku saabsan dejinta iskaashigaaga.
Mashruucyada uruurinta macluumaadka la qaybiyey, tabaruceyaasha waxay ku kordhiyaan xogta ku saabsan adduunka. Nidaamkan mar hore ayaa loo isticmaalay si guul leh, iyo isticmaalka mustaqbalka waxay u badan tahay in ay wax ka qabtaan taxadarka iyo walaaca tayada xogta. Nasiib wanaag, mashaariicda jira sida PhotoCity iyo Pothole Patrol waxay soo jeediyaan xalalka dhibaatooyinkaas. Maadaama mashruucyo badani ay ka faa'iidaystaan ​​tiknoolajiyada u suurtogeliya kaqaybgalka xirfadlaha iyo ka qaybqaadashada, in la qaybiyo mashaariicda ururinta xogta si weyn u kordha miisaanka, taas oo sahli karta cilmi-baarayaasha inay soo uruuriyaan xogta ka soo horjeeda xadka hore.